Izinto ezinqabileyo kunye nezixhobo ezinamandla kwi-Surfboard edibeneyo
I-surfboard edibeneyo yindawo eqhelekileyo kwimidlalo namhlanje. Kususela ekuqalisweni kweengxenye ze-fiberglass emva kweMfazwe Yehlabathi II, imboni ye-surfboard yayiyona yeyokuqala ukufumana iingqungquthela.
Ngaphambi kokuhlanganiswa kwamafiber, ii-surfboards zenziwe ngamaplanga kwaye zinokulinganisa i-lbs 100. Namhlanje, i-surfboard edibeneyo ngobukhulu obufanayo (iinyawo ezili-10) ingaba bunzima ngaphantsi kwe-10 lbs. Ukuphalaza lo bunzima bexabiso, i-surfboards zasebenzisa izixhobo ezi-3 eziphambili:
I-Polyurethane foam yaba yinto ebalulekileyo yokukhetha kwi-surfboards. Ilula, inika ubungqina, kwaye inika amandla. Ingqungquthela ye-foam ye-surfboard idibeneyo ixutywa phakathi kweengubo ze-FRP kwaye idala ubunzima kunye nesakhiwo se-surfboard. Ngokuqhelekileyo, "umgca" wezinkuni unamathele phakathi kwebhodi ukubonelela ngokunyaniseka okwandayo, kufana ne-I-bor.
Icandelo le-foam le-surfboard lilawulwa yinkampani iClakek Foam kwaze kwaba ngu-2005, ngexesha apho umninimzi wagqiba ukuvala ngaphandle kwesilumkiso. Namhlanje, intloko ye-foam ye-surfboards ngokuyinhloko ngokuyinhloko i-polyurethane foam. Nangona kunjalo, i-polystyrene eyandisiweyo (EPS) isetyenziswe ngokuphindaphindiweyo njengoko ukusetyenziswa kwama- respo epoxy kwanda. Kungakhathaliseki ukuba i-foam esetyenziselwa ukuba ihlale ivalwe-cell, ukwenzela ukuba ingathathi umswakama.
Iimvenge ze-thermodetry ziye zaphambili kwimpumelelo ye-surfboard. Ngaphandle kokuba iibhodi zenziwe ngamaplanga, iinguqu kunye neengubo zazisetyenziselwa ukukhusela iibhodi zamanzi.
Njengoko iteknoloji ye-resin iyaqhubeka nokuphucula, iibhodi ziyakwazi ukuqina kunye nokukhanya okulula.
Ii-resins eziqhelekileyo ezisetyenziselwa kwi-surfboards ezidibeneyo ziyi- polyester resins . Oku kubaluleke kakhulu kuba ipolyester resin ayithengi. Ukongezelela, abavelisi be-resin baye bafezekisa i-resins yabo ye-polyester kwi-resin ukuze bakwazi ukusebenza kunye kwaye bacacile.
Kubalulekile ukuba izitya ezisetyenziselwa amanzi zicacileyo, kuba i-surfboard ingumsebenzi wobugcisa njengento eqingqiweyo yezixhobo. Njengoko i-surfboards yobudala ubudala, iphendulela i-yellow kwi-ray ye-UV. Ngenxa yoko, ukuxhatshazwa kwe-UV kubaluleke kakhulu kwiimveliso ezisetyenziswa namhlanje.
Ngokuqhubela phambili kwezobuchwepheshe be-resin, akuyiyo into emangalisayo yokudibanisa kwi-surfboards eyenziwa nge-epoxy . I-Epoxy ayinaso ukukhutshwa kweVOC ngexesha lokwenziwa komsebenzi, kwaye inamandla amakhulu kakhulu, ukukhathala, kunye neempembelelo zokumelana neempembelelo. Nangona kunjalo, i-downside yangoku nje yokusebenzisa i-epoxy yiyo, ezi bhodi zivame ukujika ngokukhawuleza emva kweebhodi ze-polyester. Nangona, oku kungatshintsha ngokukhawuleza ngeendlela eziphuculweyo.
I-fiberglass yintsipho yesikhokelo kwi-surfboards. Ukuqinisekiswa kwe-fiberglass kunika isakhiwo kunye namandla kwibhodi. Ngokuqhelekileyo, iingubo ezilukhuni zenziwe ngolu hlobo lwe- fiberglass isetyenziselwa ukuqiniswa. Ngokuqhelekileyo, liphakathi kwe-4 ne-8 i-ounce indwangu. (Iinqununu ngeyard yard).
Ngokuphindaphindiweyo olunye ulonge lusetyenziswa. Okwangoku, iinqwelo ezisetyenzisiweyo zilingana ngokulinganayo kunye nexabiso elilinganayo le-fiberglass eqhuba ukusuka ekhaleni ukuya emsila, nomzila wesitimela. Nangona kunjalo, oonjiniyela baqulunqa amabhodi ngamanani ahlukeneyo e-fiber esebenza ngendlela eyahlukileyo.
Oku kunika amandla kunye nobunzima apho kufuneka khona, ngaphandle kokongeza ubungakanani obongezelelweyo.
Ikusasa le-Composite Surfboard
Abafowuni baziwa ngokuba ngabahamba phambili, kwaye oku kuza uvavanyo kunye nobunjwa obuhlukeneyo kunye nezinto. Iibhodi namhlanje ziyamkela iteknoloji yenkampani kunye nezinto ezintsha. Ii-surfboards ezidibeneyo zexesha elizayo ziquka iintambo ezifana neKevlar , i-carbon fiber kunye ne-Innegra.
Iipropati ezahlukahlukeneyo zenkxaso ezininzi ezinokufumaneka zivumele i-surfer okanye injineli, ukuba ifake iipropati zokunceda ukudala ibhodi "iphupha". Kwakhona kwenza ukuba i-surfboard ipholile kakhulu ikhangele ukuba ibe nezinto ezizodwa kunye nokwakhiwa.
Iipropati ezahlukahlukeneyo zenkxaso ezininzi ezinokufumaneka zivumele ukuba i-surfer okanye injini, ihluthe iipropati ukuze incedise ukudala i-surfboard yokugqibela.
Kwakhona kwenza ukuba i-surfboard ipholile kakhulu ikhangele ukuba ibe nezinto ezizodwa kunye nokwakhiwa.
Akunjalo kuphela izinto ezisetyenziselwa ukutshintsha, kodwa indlela yokuvelisa iyaqhubeka. Amashishini e-CNC aqhelekileyo asetyenziselwa ukuchonga ngokuchanekileyo umongo wentambo. Oku kudala iibhodi eziphantse zidibeneyo kwaye zichanekile.
Ekuqaleni, ukwesaba ukuveliswa kwemveliso kwazisa ukukhathazeka ngokususa "umphefumlo" kwimidlalo. Iintsingiselo, indlela yendabuko yokubumba izandla iyancitshiswa kumsebenzi wekhompyutha.
Nangona kunjalo, okuchaseneyo kubonakala kuyinyani. Iibhodi ezenziwe ngokwezifiso, ezisebenzisayo ngobugcisa bobugcisa, zibonakala zinjengezinye ezidumile. Kwaye kunye neenhlanganisela, ubuchule kwiindlela kunye nezinto eziphathekayo zokubhanqa amabhodi kubonakala kunika ithuba elingenammiselo lokuzilungisa nokwenza ibhodi.
Ixesha elizayo lebhodi ye-surfboard iyabonakala. Ngama-1950 ukusetyenziswa kwe-fiberglass kwaba yinguqulelo. Oovulindlela abatsha baya kuqhubeka beqhubela imvulophu baze bafumane isizukulwana esilandelayo sezinto ezidibeneyo kunye neendlela zokucwangcisa.
Ubunini bomhlaba obunembali kunye nee-Atlases kwi-Intanethi
Iintlanzi kunye neeNkcazo kwiSitezi